Kohalpur Times » नकारात्मक सोचबाट तपाईंको मस्तिष्कलाई कसरी मोड्ने ? नकारात्मक सोचबाट तपाईंको मस्तिष्कलाई कसरी मोड्ने ? – Kohalpur Times
२३ श्रावण २०७८, शनिबार ०७:०८
हाम्रो दिमागमा अचानक नकारात्मक विचारहरू आउन सक्छन् । प्रायजसो जतिबेला हामी अन्धकार र रित्तो महसुस गर्छौं, तब यस्तो विचार हाबी हुन्छन् । यतिबेला हामी धेरै खाले कुराहरू सोचिरहेका पनि हुनसक्छौँ । यसले हाम्रो ऊर्जा समाप्त गर्ने काम गर्न सक्छ । त्यहीकारण सकारात्मक सोच्न जरुरी छ । नकारात्मकताबाट कसरी टाढा रहने ? यसबारे चर्चा गरौँ :
यदि तपाई असफल हुनुभयो भने तपाईंको मस्तिष्कमा नकारात्मक विचार घुम्ने सम्भावना रहन्छ र यसले तपाईंलाई मानसिक चुनौती दिनसक्छ । यस्तो विचारबाट माथि उठ्नका लागि आफैँसँग राम्रा प्रश्नहरू सोध्नुस् । त्यस पूर्ण घटनामा कुन एउटा राम्रो पक्ष थियो, त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुस् । याद गर्नुस्, आफैंमाथि प्रश्न गर्ने र हरेक अवस्थामा केही राम्रो खोज्ने बानीले तपाईंको मस्तिष्कलाई सबै नकारात्मक विचारबाट मोड्ने काम गर्छ । -एजेन्सी